စကားနည်းပေမဲ့ နွေးထွေးနဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Suga ဟာ လူကြီး၊လူငယ်မရွေးကို ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိဘဲ အစစ်အမှန်အတိုင်းအားပေးတတ်တာကြောင့် အားလုံးက ချစ်ကြပါတယ်။ သိပ်မကြာသေးခင်က ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ GQ Magazine နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လူငယ်ထုကိုဦးတည်ပြီး အကြံပြုခဲ့တဲ့ Suga ရဲ့ စကားတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့က လူငယ်လူရွယ်တွေကြားမှာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားပြီး အားအင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ အဓိကထားပြီးပြောသွားတာကတော့ လူငယ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်းပါပဲ။
အင်တာဗျူးမှာမေးမြန်းသူဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နေရင်း လမ်းပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ဆိုပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် Suga က “ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အဓိပ္ပါယ်အကြီးကြီးဖွင့်ဆိုလို့ မရပါဘူး။ အိပ်မက်ဆိုတာကတော့ အိပ်မက်ပဲပေါ့။
အိပ်မက်တွေရှိဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည် မင်းအနေနဲ့ တကယ်ကို မလိုအပ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကြီးမှာ နေထိုင်ရှင်သန်ရင်း အိပ်မက်တွေရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီး တအားကြီးရုန်းကန်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ လူပေါင်းများစွာဟာ သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ဘဝတွေကို လျှောက်လှမ်းဖို့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားတွေပေးနေကြရတာပါပဲ။
လူကြီးတွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ဆိုတာရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လောကကြီးက လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ပိုပြီးရက်စက်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ လူငယ်တွေခမျာ ငယ်ရွယ်တုန်း လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပြီး မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုပြီး အကြံပေးခံရလေ့ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေ့တဓူဝဖြတ်သန်းရင်း ဘဝကြီးက မင်းတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတတ်တာကို အသိဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါတိုင်း လူငယ်လေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တအားကြီး အပြစ်မတင်ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ဒါ သူတို့လေးတွေရဲ့အမှားမှ မဟုတ်တာ။ ပြီးတော့လည်း သူများနဲ့ ဘယ်တော့မှ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့အိပ်မက်နဲ့ တခြားသူရဲ့အိပ်မက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးက လုပ်ကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ တကယ့်ကို ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ အိပ်မက်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်က အဲ့လိုမျိုးကို မရှိတာပါ။ အခုချိန်မှာ စိတ်ကူးအိပ်မက်ရယ်လို့ကို မရှိသေးပါဘူး။ အဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေမယ်လို့ကော ထင်လား? ဟင့်အင်း… ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝပဲ။
ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားသေးတယ်။ သေချာတာက အိပ်မက်သစ်တစ်ခုကတော့ ရှိလာမှာပေါ့။ အိပ်မက်တစ်ခုကို သေချာအကောင်အထည်ဖော် အောင်မြင်ပြီးစီးခါမှ နောက်ထပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်တာမျိုးက ရှေ့ဆက်မယ့်ဘဝကြီးအတွက် ပိုပြီးနေပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်” ဆိုပြီး Suga က အားပေးရင်း အကြံပြုသွားပါတော့တယ်။
ဒီအင်တာဗျူးထွက်လာပြီးနောက် ကမ္ဘာတဝန်းက လူငယ်တွေဟာ Suga ရဲ့ အားပေးမှုက ထိရောက်ကြောင်း ကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိပ်မက်တွေပျောက်ဆုံးပြီး အနာဂတ်အတွက် လမ်းပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက် တကယ့်ကို အားဖြစ်စေပါတယ်။ အကယ်၍များ လမ်းပျောက်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့တဲ့အခါ Suga ပြောတာလေးကို သတိရပြီး အားတင်းထားနိုင်ကြပါစေနော်။
Previous post နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှ SS501 အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးရဲ့ ကြည်နူးစရာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှု
Next post ဆရာဝန်လေးနဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းမလှလေးရဲ့ အချစ်ပုံပြင်လေးကို တွဲဖက်ဖန်တီးထားတဲ့ Win နဲ့ Min